पीसीको लागि Wyze अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् - Wyze For Windows 7/8/10 & म्याक
अगस्त 25, 2020 द्वारा फेसटाइम गाइड एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
पीसीको लागि वाइज क्याम अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
यो आधुनिक युगमा, हामीलाई थाहा छ कि निगरानी क्यामेरा कार्यालय वा घरमा अनिवार्य छ.
त्यसो भए, नमस्ते मान्छे!!! If you are wondering about “how you can download and use विन्डोजको लागि वाइज क्याम अनुप्रयोग 7/8/10 र म्याक?” But If you don’t have an idea regarding “how to Wyze अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् र स्थापना गर्नुहोस् यो?” त्यसोभए चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईं सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ.
यस लेखमा, I have given step by step guide for “how to download Wyze Cam for PC for free?”.
With this post, here I am describing you the Wyze Cam App information and steps to download the विन्डोजको लागि Wyze अनुप्रयोग 7/8/10 र म्याक पीसी.
0.1 किन पीसीको लागि Wyze अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्?
1 पीसीको लागि वाइज क्याम अनुप्रयोग कसरी स्थापना गर्ने
1.1 मेरो साइटबाट अधिक
किन पीसीको लागि Wyze अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्?
रात दृष्टि संग पनि राम्रो काम गर्दछ
स्मार्ट आवाज मान्यता
अपरेट गर्न को लागी सरल
क्रिस्टल स्पष्ट लाइभ स्ट्रिम उत्कृष्ट जूमिंग क्षमताहरूको साथ
पीसीको लागि वाइज क्याम अनुप्रयोग कसरी स्थापना गर्ने
Wyze क्याम क्यामेरा र यसको भिडियो फुटेज नियन्त्रण गर्न केहि संगै सफ्टवेयर को साथ अपरेट गर्न सकिन्छ. यस उद्देश्यका लागि, you only need the official पीसीको लागि Wyze अनुप्रयोग.
Before starting the installation process of the विन्डोजको लागि वाइज क्याम अनुप्रयोग, दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईले एन्ड्रोइड इमुलेटर स्थापना गर्नुपर्नेछ, जस्तै bluestacks, Nox अनुप्रयोग प्लाटर, वा Xeplayer.
तपाईं यी साधारण चरणहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ पीसीको लागि Wyze अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईंको कम्प्युटरमा अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्. कृपया चरणहरूको पालना गर्नुहोस् र Wyze अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्.
सुरुमा, डाउनलोड गर्नुहोस् र एन्ड्रोइड इमुलेटर स्थापना गर्नुहोस् जस्तै आफ्नो कम्प्युटरमा ब्लुएस्टेक्स तिनीहरूको वेबसाइटमा https://www.bluestacks.com/.
इमुलेटर डाउनलोड पछि, तपाईंले विन्डोजमा इमुलेटर अनुप्रयोग चलाउनु पर्छ. यसलाई चलाउनको लागि तपाईंको एन्ड्रोइड इमुलेटरको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्.
इमुलेटरमा एक खाता बनाउनुहोस् र लग इन गर्न प्रयास गर्नुहोस्.
अन्यथा, तपाईंले आफ्नो गुगल प्ले स्टोर खातामा लग इन गर्नुपर्नेछ.
अब, मा Wyze अनुप्रयोग को लागी खोजी गर्नुहोस् प्ले स्टोर. Wyze अनुप्रयोग चयन गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् स्थापना गर्नुहोस्.
कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईंले एमुलेटरको सहायताले आयात गर्नुभएको एपीके फाइल पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. [यस अनुप्रयोगको आधिकारिक संस्करण अझै उपलब्ध छैन, त्यसोभए APK तपाईको लागि मात्र विकल्प हो।]
जब तपाईं एपीके फाईलमा दायाँ क्लिक गर्नुहुन्छ, यो स्थापना हुनेछ. त्यसो भए एपीके फाईल सिधा अनुप्रयोगमा रूपान्तरण हुनेछ.
इमुलेटरमा अनुप्रयोग राम्रोसँग चलाउन, तपाइँ घर स्क्रिनमा फिर्ता जान आवश्यक छ. अब तपाईं पीसीमा Wyze अनुप्रयोग प्रयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ र तपाईंको सबै सुरक्षा र निगरानीको साथ जान सक्नुहुन्छ.
Wyze अनुप्रयोगको बारेमा
यो विश्वको कुनै पनि कुनामा HD गुणवत्ता भिडियो फुटेज हेर्नका लागि एक शानदार निगरानी र निगरानी अनुप्रयोग हो.
यस अनुप्रयोग कुशलतापूर्वक विस्तृत पूर्णताका साथ भिडियो फुटेज प्रदान गर्नका लागि बनाइएको हो. वाइज क्याम अनुप्रयोगले दुई-तर्फी आवाज संचार र स्मार्ट ध्वनि पहिचान सुविधाहरू पनि समावेश गर्दछ.
यही कारणले गर्दा तिनीहरू सबै आफ्नो घर र कार्यालयको लागि यो Wyze क्याम अनुप्रयोग प्रयोग गर्न रुचाउँछन्.
यो लेख पढ्न को लागी धन्यवाद, मलाई आशा छ कि तपाईंले सबै विवरणहरू प्राप्त गर्नुभएको छ जुन तपाईंलाई पक्कै मद्दत गर्दछ विन्डोज को लागी Wyze अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् 7/8/10 र म्याक.
अझै, यदि तपाइँसँग उही सन्दर्भमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया दयालु मा साझा टिप्पणी बाकस. थप, तपाईलाई अझ सामान चाहिन्छ, त्यसो भए मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्. म तपाईलाई सहयोग गर्न सँधै खुशी छु.
अन्तर्गत फाइल: डाउनलोड फेसटाइम Tagged With: पीसीको लागि Wyze अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् - Wyze For Windows 7/8/10 & म्याक, Download Wyze App Windows 7/8/10 र म्याक, Install Wyze App for PC, पीसीको लागि Wyze अनुप्रयोग, Wyze Cam App for PC- डाउनलोड, Wyze Cam App-download for PC
पीसी को लागी बुद्धिमान दृश्य हेर्नुहोस् (विन्डोज 7, 8, 10 & म्याक)